"Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany" - Gal. 5:22,23.
Raha manana an'i Kristy mitoetra eo amintsika isika, dia ho Kristianina na ao an-trano na any ivelany. Hanao teny malefaka amin'ny havany sy ny mpiara-miasa aminy izay olona kristianina. Halemy fanahy izy, hahalala fomba, be fitiavana, be fiantrana, ary hanabe ny tenany ho amin'ny fonenana miaraka amin'ilay fianakaviana any ambony. Haneho ilay fanjakana handrosoany izy raha toa ka anisan'ny fianakavian'ny Mpanjaka. Hiteny amim-pahamoram-panahy amin'ny zanany izy, satria ho fantany fa mpandova an'Andriamanitra koa ireo, mpikambana ao amin'ilay lapan'ny lanitra. Tsy mba misy eo anivon'ny zanak'Andriamanitra ny fanahin'ny toetra henjana; satria "ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalana manohitra izany". Ny toe-tsaina izay koloina ao an-trano no toe-tsaina hiseho any am-piangonana.
O! Tsy maintsy beazintsika ny fanahintsika mba hangoraka, mora, halefaka, ho feno famindram-po sy fiantrana. Raha ilaozantsika ny fieboeboana, ny resaka kivalavala, ny kivazivazy sy ny hanihany, dia tsy tokony ho lasa mangatsiaka, tsy mba miombom-po sy tsy mahay miaina kosa isika. Tokony hitoetra aminao ny Fanahin'ny Tompo mandra-pahatonganao ho tahaka ny voninkazo mani-pofona avy ao amin'ny sahan'Andriamanitra. Tokony horesahina mandrakariva ny momba ilay fahazavana, i Jesôsy, Ilay masoandron'ny fahamarinana, mandra-piovanao avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny toetra ho amin'ny toetra, mandroso avy amin'ny hery ho amin'ny hery, ary mitaratra bebe kokoa hatrany ilay endrika sarobidin'i Jesôsy. Rehefa manao izany ianao dia hanoratra ao amin'ny bokin'ny lanitra ny Tompo hoe: "Tsara izany", satria maneho an'i Jesôsy ianao.
Tsy tokony ho mafy fo, tsy azo hatonina ny Kristianina; tokony ho hita taratra eo amin'ny fitondran-tenantsika i Jesôsy, ary tokony hanana toetra tsara izay mitondra ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Tokony ho fanatrehana tsy miala amintsika ny fanatrehan'Andriamanitra; ary tokony hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao isika, na aiza na aiza no misy antsika. Tokony hahafantatra ireo manodidina anao fa mameno ny fiainanao ny rivo-piainan'ny lanitra. — RH, 20 Sept. 1892.